Polisy misahana ny habakabaka sy ny sisitany 13 ireo tranga nanamarika ny taona 2018 - Madagascar Informations
Polisy misahana ny habakabaka sy ny sisitany
13 ireo tranga nanamarika ny taona 2018
Misy ny hoe ireo asa 10 mafy ataon,’i hercule. Asa 10 mafy ihany koa ny hatrehan’ny polisy misahana ny habakabaka sy ny sisitany, izay tarihin’ny Commissaire divisionnaire de Police Lebiria Rufin Tolojara. Ireto ireo asa sahan’ireo Polisy eo ambany fifehezana alohan’ny hitanisana ireo tranga nanamarika ny taona 2018. Manara-maso ny fivoahana sy ny fidiranana ireo olona ny tany eo Madagasikara, ny fivoahana sy ny fidiranan’ireo fitaovam-piadiana, ny fanaoavana tafikan-drongony. Minadraikitra ny firovana ireo seranam-piaramanidinan ireo foto-drafitrasa ao amin’ireny seranam-piaramanidinba ireny, ireo mpandeaha sy ny entana entiny. Miandraikitra ny fiarovana ireo olona manakaja sy ambony na VIP mandritra ny fan,dalovany eo amin’ireny seranam-piaramanidina ireny. Manangom-baovao ihany koa ry zareo. mitazona ny filaminam-bahopaka ary afaka misahana ny asan’ny polisy manao famotorana ihany koa. miantoka ny firavona ireo zava-tsarobidy mandritra ny fandalovany eo amin’ny seranam-piaramanidina ary farany dia mandrindra ireo asa any amin’ny seranam-piaramanidin’i i Antsiranana, Nosy-bve, Mahajanga, Toamasina Tolagnaro.
Ireo tranga nanamarika
ny 26 novembra lasa teo dia nisy ny fikasana hampiasa passeport irlandais sandoka nataon’ny vehuvavy malagasy. Ny 14 novembra lasa teo kosa dia tertany Irakianina maromaro ny saika hampiasa passeport italiainana hosoka.. Ny 20 oktobra kosa. mbola teratany irakianina roa no saika hampiasa passeport croate sy grec sandona..Ny omalin’io dia nisy koa fikasana hampiasa “titre de séjour sandoka. 16 oktobra , nisy ny halatra finday teo amin’ny toeram-piaingana. Ny 15 oktobra dia nisy mpandeha iray Houachie Sofiane nanakorontana ny Air madagascar tao anbatin’ny firamanidin’izy ireo.. Mbola teratany Irakiaina ihany no saika hampiasa passeport iisraeliainina sandoka ny 07 septamba 2018. Ny 31 aogositra dia nisy ny fikasana fampiasana passeport bulgare sandoka izay nataona syrianina.Ny 30 aogositra dia nisy ny fikasana hampiasa karatra fipetrahana eto Madagasikara boimétrique hosoka ho an’ny teratany frantsay iray.. Ny 04 jolay dia nisy ny fikasana hampiasa passeport nfrantsay nataon’ny komorianina tsy tompony. Ny n08 may kosa indray dia nisy ny fiokasana hampiasa passeport canadien hosoka nataon’Arghan. Ny 22 marsa kosa dia nisy ny fikasana hampiasa karatra ahazoana mipetraka biométrique malagasy natao’ny teratany thailandais. Ny 17 marsa dia nisy ny fikasana hampiasa karatra ahazoana mùipetraka biométrique malagasy hosoka nataon’ny teratany belge. Ary farany ny tranga nioseho ny 11 janoary fikasana hanodnrana an-tsokosoko zana-tsokatra 126..
Tsiahivina fa niisa 146 560 ireo viosa nomena teo am-paahatongavana ho an’ireo tsy mpifindra-moinina tamin’iny taon-dasa iny. ary ny avy an’i Paris no mitarika izany. manao ny ain’ny tsy ho zavatra ireo polisy misahana ny habakabaka sy ny sisitany satria dia miasa andro aman’alina izy ireo.
← Aboudlaye Bathily / P R pi
Police de l’air et des frontières à Ivato 202 personnes reconduites, refoulées et expulsées →
Sortie de promotion INSPNMAD
18 mars 2017 Madagascar Informations 0